Baolina kitra -Analamanga :: Hifandona indray ny AS Adema sy Elgeco Plus • AoRaha
Baolina kitra -Analamanga Hifandona indray ny AS Adema sy Elgeco Plus
Isan’ireo lalao miverim- berina hatrany ny fihaonan’ny AS Adema sy ny Elgeco Plus, na eto Analamanga izany, na any amin’ny fifaninanam-pirenena. Hifandona indray ireto ekipa roa ireto amin’ny alahady ho avy izao, mandritra ny lalao ampahefa-dalana, fiadiana ny ho tompondakan’Analamanga.
Voalohany tao amin’ny vondrona B ny AS Adema teo amin’ny filaharana, taorian’ny andro fito ho an’ny dingan’ny fifanintsananana. Fahefatra kosa ny Elgeco Plus tao amin’ny vondrona A. Ka izay no nampifanena indray lalan’ireto klioba roa ireto. Hotanterahina eny amin’ny kianjaben’i Mahamasina, amin’ny alahady ho avy izao, ity lalao miendrika famaranana mialoha ny fotoana ity.
Tamin’ny volana ôktôbra 2018 no nifanatrika farany ny AS Adema sy ny Elgeco Plus, nandritra ny lalao famaranan’ ny fiadiana ny ho tompon’ amboaran’i Madagasikara. Nandresy tamin’io fotoana io ny ekipan’i Robson Hubert na i Bob, teo amin’ny kianjan’ i Mahamasina. Hiezaka hamita ny valin’ady ny AS Adema amin’ny alahady ho avy izao.
Hiezaka hanararaotra ny fahasahiranan’ny tompondakan’Analamanga ny AS Adema taorian’ireo faharesena intelo nisesy nanjo azy ireo teo amin’ny dingan’ny fifanintsanana. Fandresena teo amin’ny andro farany no nahafahany niakatra ho isan’ireo klioba hiatrika ny ampahefa-dalana, raha efa sarotsarotra ny tantana ho azy.
Hanomboka anio sabotsy ny ampahefa-dalana amin’ity Ligy 1 ity, eny Mahamasina. Ny CF-TFC sy ny Mama FC no hifandona voalohany. Manaraka izay dia hihaona amin’ny CNaPS Sport ny Cosfa, izay tsy mbola nisedra faharesena mihitsy hatramin’ izao ary isan’ireo klioba manana herijika indrindra ho tompondaka. Ny Fosa Juniors sy Uscafoot kosa no hanokatra ny andro alahady, mialohan’ny lalao tena andrasan’ny maro, hifandonan’ny AS Adema sy ny Elgeco Plus.
BILLARD – TOURNOI VÉTÉRANS :: Mbola tsy lefy laza i Mamih Master